Ajụjụ - Raymin Display Products Co., Ltd.
Gịnị ka anyị kwesịrị ime iji kwado?
Dị ka Ọtụtụ n'ime anyị akwụkwọ FSDU na isiike onyinye igbe na-omenala-mere, na-emekarị anyị na-amalite site imewe Ọdịdị na size maka ndị ahịa. N'oge a, anyị chọrọ ozi gbasara nkọwa ngwaahịa gị (nha, ibu, otu esi egosipụta) ma ọ bụ zitere anyị ngwaahịa ngwaahịa ole na ole maka nrụpụta nrụpụta.
Nwere ike ịnye nlele?
Ee, ọcha na-acha ọcha ma ọ bụ agba sample site ink-ugboelu ebi akwụkwọ. Anyị na-eme nhazi ụzọ maka onye ahịa iji kwenye, wee nye ya ihe nlele na-acha ọcha iji chọpụta nha, ogo akwụkwọ, ikike na-akwado ibu. Mgbe Ọdịdị enen, anyị ga-enye ndị ahịa a na-anwụ-ebipụ akara ka artwork. Ọtụtụ mgbe, ọ bụ ndị ahịa na-emepụta ihe osise maka ngosipụta ma ọ bụ igbe nkwakọ ngwaahịa, ọ bụrụ na onye ahịa nwere nsogbu ma ọ bụ na enweghị onye mmebe iji mee nke a, anyị nwere ike inyere ha aka ma ọ bụrụhaala na ha na-enye anyị ihe eji arụ ọrụ aka. Ọzọ bụ ime agba agba tupu imepụta ihe, iji lelee ihe osise a na-etinye n'ụzọ ziri ezi na igbe ngosi igbe na igbe dị elu.
Gịnị bụ sample ụzọ oge?
Ọ bụ ụbọchị 1-2 maka agba ọcha na ụbọchị 3-4 maka agba agba.
Nwere ike anyị na-eji ink-ugboelu e biri ebi akwụkwọ ngosi sample ma ọ bụ àgwà akwụkwọ nkwakọ ịlele agba na uka mmepụta?
Mba, n ’ihi na ọ dị iche na mpe mpe akwụkwọ na imepụta ihe, yabụ agba ga-adị oke iche na agba nke imepụta ihe. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịhụ etu ụcha ga - adị n’iru imepụta ihe, anyị ga - enye ndị ahịa A3 ma ọ bụ A4 ihe eji ebi akwụkwọ nke dị 95% nso na agba na imepụta ihe.
Ọ dị anyị mkpa ịkwụ ụgwọ maka ihe nlele ahụ?
Eeh. Ọ na-abụkarị 50 $ maka ihe ọcha na 100 $ maka agba agba, mana enwere ike iwepụta ya site na ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke iwu mgbe enyere iwu.
Kedu ka ị si ebu ihe nlele ahụ?
Anyị na-ebupukarị ndị ahịa DHL, UPS, FedEx ma ọ bụ akaụntụ TNT. Ọ bụrụ n’inweghị onye na-eburu anyị ozi ahụ, anyị nwere ike ịhazi ndozi site na iji ọrụ ndị nnọchi anya anyị nke na-akwụ ụgwọ dị ala karịa onye ozi ahụ, ma ị kwụọ anyị ụgwọ onye ozi, nke anyị ga-akwụghachi n’aka onye ozi ahụ. Zọ a dị ọnụ ala karịa obere oge karịa ịnata ngwugwu ahụ.
Gịnị bụ nnukwu iji ụzọ oge?
Ọ bụ ụbọchị 12-15 maka ngosipụta PDQ na igbe akwụkwọ mma nke arụpụta ihe.
You na-enye ọrụ ichikota maka ihe ngosi a?
Ee, anyị nwere. Onye ahịa zitere ha ngwaahịa ha, anyị na-enyere aka ịkpọkọta POS ngosipụta ha nke ọma, tinye ngwaahịa na jupụta igbe maka oghere efu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. N'ikpeazụ Anyị nwere ike zuru ezu elu katọn na V-mbadamba juru n'ọnụ dum ngosi. O doro anya na anyị ga-akwụ obere ụgwọ ọrụ maka ọrụ a.
Ọ bụrụ na ndị ahịa na-eche nsogbu ihu na-ezukọta ngosi ngosi, kedu ka ị ga - esi nye aka?
Anyị na-echekarị imepụta ihe ngosi POP site na ikpokọta ngwa ngwa, ma nye otu mpempe akwụkwọ ntuziaka na igbe igbe ọ bụla. Ọ bụrụ na ndị ahịa amaghị maka otu esi ezukọ, anyị ga-ewere obere vidiyo iji gosi ha otu esi eme nzọụkwụ